FIVORIAMBE MOMBA NY ASA ANY GENEVE : Hampiakatra ny fananan’ny Malagasy asa mendrika
Fanamby lehibe apetraky ny fitondram-panjakana ankehitriny izay tarihin’ny Filoha Andry Rajoelina ny hananan’ny Malagasy asa mendrika. Heverina ny hampiakatra hatrany ny fahatsaran’ny asa eto Madagasikara amin’ny alalan’ilay fivoriambe izay handraisan’i Madagasikara anjara any Genève. 12 juin 2019
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy afak’ omaly maraina any Genève ny fivoriambe hoentina hanamarihana ny faha-100 taonan’ny sampan-draharaha iraisam-pirenena misahana ny asa na ny OIT.
Mifanindra an-dalana amin’ny fivoriana momba ny asa fanao isan-taona izay haharitra 12 andro. Firenena miisa 187 maneran-tany no mpikambana eo anivon’ity sampan-draharaha ity ary anisan’izany i Madagasikara. Eto amintsika izay anisany ahitana ny birao fiasan’ny OIT. Ity farany ihany koa dia manohana sy manome tosika hatrany an’i Madagasikara eo amin’ireo sehatr’asa maro. Filoham-panjakana am-polony maro avy amin’ireo firenena mpikambana no mandray anjara amin’ity fivoriambe ity ka isan’izany ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Manatrika izany ihany koa ireo mpampiasa sy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny eny anivon’ny orinasa. Dinihina manokana amin’izao fihaonana lehibe izao ny paikady iraisana hiadiana amin’ny herisetra. Hisy ny famoahana fanambaràna iraisana eo amin’ny tontolon’ny asa manoloana ny fivoaran’ny teknolojia sy ny fiovaovan’ny toetr’andro. Tanjona apetraky ny OIT mandritra ny fikaonan-doha eo amin’ireo Filoham-panjakana maro sy tompon’ andraikitry ny orinasa ny handrafitra fenitra iraisam-pirenena sy hamolavola politika ary hanangana fandaharan’asa mikendry ny fampivoarana ny asa mendrika ho an’ny rehetra.
Fanamby lehibe apetraky ny sampan-draharaha iraisam-pirenena misahana ny asa ny hampiroboroboana ny asa mendrika ho an’ny tanora ary ny ady atao amin’ny fampiasana ankizy tsy ampy taona. Samy hanana anjara fitenenana mandritra ity fivoriambe an-tampony atao any Genève ity avokoa ireo Filoham-panjakana manatrika izany. Araka ny fantatra dia anisany handray fitenenana amin’izany ny Filoha Andry Rajoelina. I Madagasikara amin’ny alalan’ny mpitondra ankehitriny dia efa nametraka tanjona lehibe eo amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny asa. Maro ireo ezaka sy dingana efa vita, toy ny fampiakarana ny karama farany ambany ho roa hetsy Ariary. Heverina fa hisy akony goavana eo amin’ny tontolon’ny asa malagasy ary vao mainka hampiakatra ny tahan’ny fananana asa tsara eto Madagasikara ny fandraisana anjaran’ny Filoha mandritra ity fivoriambe any Genève ity.